Fizahantany: nihoatra ny tamin’ny 2008 ny vahiny nitsidika | NewsMada
Fizahantany: nihoatra ny tamin’ny 2008 ny vahiny nitsidika
Mitohy ny fampiroboroboana ny fisarihana mpizahatany ho avy aty Madagasikara. Hatao, ny 18 hatramin’ny 21 jona ho avy izao, eny amin’ny CCI Ivato, ny “Foara iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany” (ITM) andiany taona 2020. Miara-mikarakara azy ny minisiteran’ny Fizahantany sy ny Ofisim- pirenena misahana ny fizahantany (ONTM), miaraka amin’ireo matihanina amin’ity sehatra ity isan-tsokajiny.
Nambaran’ny minisitry ny Fizahantany, Randriamandranto Joël, fa mihatsara hatrany ny fizahantany eto amintsika. Nihoatra ny tamin’ny taona 2008, tarehimarika ambony indrindra (375 000), ny vahiny nitsidika an’i Madagasikara ny taona 2019, nahatratra 378 000. Nomarihiny fa anisan’ny nahatonga izany ny fahatokisan’ny mpiara-miombona antoka samihafa any ivelany fa azo antoka ny fanjakana mikasika ny fizahantany amin’izao fotoana izao. Mitohy ny paikady hanatsarana hatrany izany, mitety firenen-kafa, toy ny any India sy ny any Eoropa Atsinanana, ny any Afrika Atsinanana, hampahafantarana sy hivarotana ny fivahiniana ary Madagasikara.
Karazana mpanjifa sy tolotra samihafa
Eo ny fanomezana tolotra hafa sy ny fikendrena mpanjifa hafa, ankoatra ny fitsidihana ny morontsiraka sy ny tontolo iainana, toy ny karazana hetsika an-dranomasina, ny fampitomboana ny toerana azo tsidihina, ny fampitomboana ny karazana trano fandraisam-bahiny, sns.
Mikasika ny “ITM 2020”, maherin’ny 300 ny mpandray anjara, amina velaran-tany 30 000 m2. Ahitana ireo matihanina amin’ny fikarakarana mpizahatany, ny fiantranoana sy ny fisakafoana, ny kolontsaina, ny taozavatra sy ny mpanakanto, sns. Hisy ny famelabelaran-kevitra, ny fihaonana hifampiraharahan’ny mpandraharaha sy ny orinasa (B2B), sns. Eo koa ny lalao tombola sy ny lanonana samihafa.